सिरहामा सेनाद्वारा कुटिए पत्रकार |सिरहामा सेनाद्वारा कुटिए पत्रकार – हिपमत
सिरहामा सेनाद्वारा कुटिए पत्रकार
सिरहामा एक पत्रकार नेपाली सेनाबाट कुटिएका छन् । सिरहा सदरमुकाममा लकडाउन पालना गराउन खटिएका नेपाली सेनाको टोलिले फोटो खिच्ने क्रममा नवजागृति साप्ताहिकका पत्रकार बद्री नारायण यादवलाई कुटपिट गरेको हो । आफू पत्रकार भएको र लकडाउन पालना गराउन सेना खटिरहेको दर्शाउन फोटो खिच्दा दुर्ववहार र कुटपिट गरेको पत्रकार यादवले बताए ।
पत्रकार यादवले भने जथाभावी हिड्नेहरुलाई सचेत गराउने र धपाउने काम गरिरहदा समाचार बनाउने अभिप्राय राखेर त्यसको फोटो खिँचे । त्यही क्रममा त्यहाँ खटिएका नेपाली सेनाका कमाण्डरले मतिर इसारा गरेको हुन भन्दै बोलाउन लगाए । मलाई बोलाउन आएका सेनाले प्रेस कार्ड हेर्दा हेर्दै पाइपले पिट्दै लग्यो । ‘सेनाको फोटो खिच्ने ? को हो तिमि ?’ भन्दै हप्काए । त्यसपछि मैले भने,‘म के अनुचित गरे ? लकडाउनलाई सशक्त बनाउनु राम्रो हो त्यसैलाई प्रोत्साहन हुने र सचेतना फैलाउने गरी समाचार लेख्नका लागि फोटो खिँचे ।’ तैपनि हप्काउदै त्यहाँ खटिएका कमाण्डरले भन्यो,‘सेनाको फोटो
मैले सहज वातावरणमै फोटो खिँचे ।
तनावको कुनै अवस्था थिएन् । मिडियाकर्मी हो भन्ने प्रयाप्त आधारहरु प्रष्ट थियो । सहज रुपमा फोटो खिँचे । फोटो खिच्नुको कारण पनि प्रष्ट्याउने प्रयास गरे । भाग्ने प्रयास गरिन् । झन कमाण्डरले भन्दा नजिक जान खोजिरहेकै थिए कि त्यतिकैमा पाइपले मलाई कुटियो ।
यस घटनाको बिषयमा नेपालि सेनाको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।
बुधबार, बैशाख ३१, २०७७मा प्रकाशित गरिएको